Microsoft က copy Windows တွေကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ Windows Genuine အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်လို့ နည်းနည်း ဆွေနွေ တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကျွန်တော် ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းကို တင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်စေချင်တဲ့ စေတနာ တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
Windows7 ဖြစ်ဖြစ် Windows XP ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် Microsoft က ထုတ်တဲ့ Windows တွေကို Windows Activation Technologies (WAT) လို့ခေါ်တဲ့ new update အတွက် Microsoft က Windows တွေထဲမှာ ထည့်ပြီး ထုတ်လုပ် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ WAT ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ သူက copy Windows တွေကို Activation Crack ပြုလုပ်လို့မရအောင် Disable ပေးတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ (Copy Windows တွေကို up to Date လုပ်တဲ့အခါမှာ WAT update က Windows အတွက် Activation code ဖြစ်တဲ့ KB971033 ကို Windows Activation လုပ်လို့မရအောင် Disables ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ )ဒါကြောင့် Screen က အမည်ရောင်ဖြစ်သွားပြီ ညာဘက်ထောင့်မှာ Windows Genuine စတဲ့ စာတန်းကြီးပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Windows က ဆက်လက်သုံးလို့ ရနေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Microsoft က ထောက်ပံမှုမပေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သိကြတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုဘဲ လုံခြုံလှပါပြီဘဲပြောပြော အားနည်းချက်ကတော့ ရှိစမြဲမို့ Windows7Home, Premium,Professional, Ultimate, and Enterprise users တွေမှာ Windows Activation Technologies (WAT) or Windows Genuine Advantage (WGA) update (KB971033) မဖြစ်တာကို ဖြစ်စေတဲ့ Remover WAT Software လေကို Run ပြီးတာနဲ့ မိမိစက်ကို Restart ချလိုက်တာနဲ့ WAT က Auto Enabled ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် copy Windows သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအလုံး လိုအပ်မည်ထင်က မိမိမှာ မဖြစ်လဲ Download ချပြီ သိမ်းထာဖို့ အကြုံပေးရင် အောက်မှာ Windows XP အတွက်ကော Windows7အတွက်ပါ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Windows Genuine Advantage အကြောင်းကို သိခြားတင်ပြပေးပါအုံးမည်။
Windows XP ( Restart ချစရာမလိုပါ.)
Windows7(For all Version)
Indsendt af itnadamtui kl. 22.23